जनकपुरमा कथा गोष्ठी कला / साहित्यशुक्रबार, फागुन २४, २०७५
‘हिउँमाझी’का चन्दा–जोखाना सगरमाथाको कथा हो हिउँमाझी । त्यसैले पाठकहरुलाई हिउँमाझी नयाँ हुन सक्छ । राई भन्छन्, ‘सगरमाथा आरोहण सबैले गर्न सकिदैन तर हिउँमाझी पढेपछि अनुभव भने गर्न सकिन्छ ।’ समाचार, कला / साहित्य२ घण्टा
‘गोनु झा र आकासे दरबार’ ‘सरकार तर म चार महिनापछि मात्र दरबार निर्माण गर्दछु । अनि दरबार बनाउने काममा आवश्यक सामाग्रीहरू इंटा, ढुङ्गा आदि सबै हजुरका तर्फाट पुर्‍याउनुपर्छ’ गोनु झाका यति कुरा सुनेर राजाले ‘हुन्छ म त्यहीँ पुर्‍याइदिउँला’ भने । कला / साहित्यआईतबार, चैत १७, २०७५
सुनिला गोलो, रातो र ठूलो घाम क्षितिजभित्र छिर्यो । छाया हरायो । उतापट्टि उज्यालो भयो होला, यता अँध्यारो बढ्यो । कला / साहित्यशनिबार, जेठ ३२, २०७६
नाम मात्रको लोग्ने ! कला / साहित्यशनिबार, असार १४, २०७६
स्वर्ग जाने बाटो प्रभाकरको आँखा खुल्यो । सँगैकी कोपिला अहिले थिइनन् । प्रभाकरले छामछुम पार्यो, यताउता हेर्यो । कोपिला कतै देखिइनन् । कोपिलाले खोलेको रातो कपडा सबै जस्ताको तस्तै थिए । कोपिला मात्र त्यहाँ थिइनन् । कला / साहित्यशनिबार, साउन ११, २०७६
वरिपरि मलाई थाहा छ, मेरो अगाडि भएका सम्पादक महोदयलाई कस्तो कथा मन पर्छ ? यौन कथा । हुन त कुन सम्पादकलाई मन नपर्ला र, युवतीले लेखेको यौन कथा ! कला / साहित्यशनिबार, साउन १८, २०७६
सिर्फ मेरो छोरो न त गर्भ बोक्न उसलाई सोधियो, न त गर्भपतन गराउन नै उसलाई सोध्न जरुरी ठानियो । उसको गर्भ त अरु कसैको मर्जीमा चल्ने भाँडो न थियो । कला / साहित्यशनिबार, साउन २५, २०७६
तस्बिर फोटोमाथिका जिज्ञासा समाधान गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो, ऊ फोटो बनाउने कारखानाको विज्ञापन गरिरहिछ । साठीको दशकपछि आज अनायासै उसको मनले ती दुई तस्बिर विश्लेषण गर्न थाल्यो । कला / साहित्यशनिबार, साउन ३२, २०७६
कण्ठमा कृष्ण कला / साहित्यशनिबार, भदौ ७, २०७६
तीजको लोग्ने लाग्नेले स्वास्नी सम्झियो । किनभने हिजोअस्ति त्यतिखेर खाना खाने समय हुन्थ्यो । खाना सम्झेर लोग्ने भान्छा छिर्यो । बिहान चिया पकाएको भाँडो ग्यासमाथि झिँगा पकाइरहेको थियो । कला / साहित्यशनिबार, भदौ २१, २०७६
राष्ट्रियसभा निर्वाचनः प्रदेश ५ मा ३०३ मत खस्यो
एसियाकै लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा
मापसे गरेर सवारी चलाए अब हिरासतको बास
मुद्दा चल्दाचल्दै सिद्धबाबा भागेकै हुन् त ?